HomePod cusub oo iPad ku xiran? Bloomberg ayaa tiri taasi waa mustaqbalka | Waxaan ka socdaa mac
HomePod cusub oo iPad ku xiran? Bloomberg ayaa leh taasi waa mustaqbalka
HomePod wuxuu noqon karaa mid ka mid ah aaladaha muhiimka ah ee Apple haddii saadaalinta falanqeeyayaasha Bloomberg ay soo baxaan. Falanqeeyaha joogtada ah, Mark Gurman wuxuu leeyahay mustaqbalku wuxuu dhacayaa iyadoo Apple ay soo saareyso mustaqbal heer sare ah oo HomePod ah oo kara ku dar ipad ku xiran gacanta gacanta ee robot-ka ah ee la socota oo raacda isticmaaleyaasha qolka.
Sida laga soo xigtay macluumaadka cusub ee uu bixiyay Mark Gurman, oo ah falanqeeyaha Bloomberg, taas oo ah, mid ka mid ah joornaalada takhasuska leh ee ugu caansan, waxaa lagu qeexay in Apple ay miisaameyso suurtagalnimada ipad ku dar HomePod cusub. Jumladdan waxaan ku aragnaa laba fikradood:
Un moodel cusub oo HomePod ah. Maaha markii ugu horeysay ee aan maqalno warkan mana ahan wax waali ah iyadoo la tixgelinayo in shirkaddu ay dhawaan joojisay HomePod-kii asalka ahaa inkastoo aad wali iibsan karto. Dabcan, taxaddar maxaa yeelay waad heli kartaa moodal laga keenay saddex sano ka hor.
Qalabka cusub ee lagu soo bandhigi karo suuqa ayaa leh Ipadka waxaa ku lifaaqan gacanta aalado Kuwaas oo lagula socdo oo loola socdo isticmaalayaasha qolalka ay ku jiraan.
Waxaan ka ogaanay suurtagalnimada bilaabista cusub qaabka shaashadda taabashada, laakiin waxba kamaanaan ogeyn sifooyinkaan cusub ee cajiibka ah. Waxaan ka hadleynaa HomePod oo isku dari doona ‌iPad‌ iyo sameecadda ‌ sidoo kale lagu dari doono kaamiro lagu sheekeysto fiidiyaha. Apple waxay baareysaa suurtagalnimada in ‌iPad‌ ay ku xirto afhayeenka iyada oo leh cudud robot ah oo u dhaqaaqi karta raacitaanka isticmaale hareeraha qolka, la mid ah qalabkii ugu dambeeyay ee Echo Show ee Amazon. Aqoonsiga wajiga waxaa loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo adeegsadayaasha inta lagu gudajiro wicitaanada shirarka ama marka la weyddiiyo dareenka.
Bloomberg waxay xustay in horumarinta sameecaddan-dhamaadka sare ay ku jirto heerarka hore. Xaqiiqdii waxay ku tilmaamaan "fikrad", wax la mid ah shatiga. Wax aan iftiinka waligood arki karin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » HomePod cusub oo iPad ku xiran? Bloomberg ayaa leh taasi waa mustaqbalka
Siri "wuxuu ku dhawaaqayaa" dhacdo soo socota Abriil 20